Hwemavhiri Wiricheya - Karman Healthcare
Unoda hunhu wiricheya?
Hunhu hunotanga nefureni yakasimba, furemu ndiyo inonyanya kukosha chikamu che wiricheya, sezvo inogona kukukanganisa iwe zvakanaka, kana kukuvadza. Zvichienderana nezvakawanda zvakasiyana furemu, zvinogona kubatsira nezvido zvako zvezuva nezuva, zvinoenderana kana furemu iri lightweight, kana iri compact uye inopetwa, kana iri hombe uye inorema furemu. Kana furemu iri yakapetwa saka ndipo pokutangira pakanaka, izvi zvinoreva kuti unogona kuichengeta munzvimbo dzakabatana, izvi zvakare zvinoreva kuti inotakurika, unogona kuipeta woitakura nematanho, kana uri kufamba nemotokari kana pachena kutakura. Kana furemu iri yakareruka saka zvinoreva kuti yaizobvumidza munhu mudiki kana asina kusimba kuti agone kuichengeta mutrunk remota kana SUV. Kana furemu iri yakapfava saka zvinoreva kuti inopfuura inogadzirwa nealuminium, izvi zvinoita kuti furemu ireruke kupfuura zvigaro zvesimbi zvakajairika.
Iyo yakasimba furemu zvinhu inogona kugadzirwa nealuminium, simbi, kana kabhoni fiber. Zvishandiso zvinonyanyozivikanwa ndeye aluminium nesimbi, zvemanyorero mavhiripu kupfuura zvingangoita chigaro chako chinogadzirwa kubva kune imwe yemhando idzi mbiri dzezvinhu. Kusarudza chinhu chimwe pane chimwe kunoenderana nekusimba kwechinhu uye kusasimba, uye sei wiricheya ichashandiswa.
Macheya emhando yepamusoro ane maficha akanaka anouya stock ne wiricheya kubva kumugadziri. Hukuru maficha anosanganisira akapetwa furemu, chinogadziriswa chigaro kukwirira, bvisika tsoka / tsoka, flip kumashure kana bvisika mawrestrests, zvinokwanisika upholstery, muchengeti kana shamwari inobata, shamwari mabhureki, foldable backrest, anokurumidza kuburitsa mavhiri, uye nezvimwe. Zvichienderana nezvamunoda, zvimwe zvezvinhu izvi zvinogona kuve zvakakosha kwauri. Dzimwe dzesarudzo idzi uye maficha anouya stock ne wiricheya, vamwe iwe unofanirwa kuodha senge sarudzo, iyo vagadziri vazhinji vanogamuchira nemufaro.
Wheel zvinhu zvinoenderana nerudzi rwei wiricheya unotenga. Izvo zvinhu zvinowirirana pakati pevhiri neshure, mavhiri ekumberi anowanzo gadzirwa nerabha kana polyurethane zvinhu. Mavhiri ekumashure anogona kugadzirwa ne polyurethane pamwe nezvimwe zvinhu zvakawanda. Izvo zvakare zvinoenderana nekuti unosarudza pneumatic tire kana yakapfava yemahara kubaya yemahara zvinhu.
Kune vazhinji wiricheya zvigaro zvigadziriso pamusika, zvinoenderana nezvauri kutsvaga, unogona kuwana pekugara gadziriro inoenderana nezvido zvako. Kugara masisitimu anouya akasiyana maumbirwo uye hukuru, tinokurudzira kuti utitane nesu maererano nezvaunoda mukugara masisitimu. Isu tinopa izvo zvakajairika wiricheya seating system uye isu zvakare tinopa iyo S-Shape Seating System, inova yedu patent tekinoroji isingatengeswe chero kumwe kunhu muUS. Dzimwe nzvimbo dzekugara dzinoitirwa mushandisi, izvi zvinowanzoitika tsika manual mavhiripu. tsika manual mavhiripu dzakagadzirirwa zvakanangana nehurefu nehupamhi hwemushandisi, yakagadziridzwa nzira yese kusvika pahukuru hwenzvimbo dzekugadzika netsoka. Dzimwe nzvimbo dzekugara dzinodzivirira maronda ekumanikidza uye matambudziko emusana kuti asaitike kwenguva yakareba, senge S-Shape Seating System iyo inodzivirira matambudziko akadaro uye inopa zvimwe zvinowoneka kupfuura zvakajairwa wiricheya yemawoko.
Kugara upholstery inowanzo gadzirwa neyenylon zvinhu, izvi zvinogona kubatsira mukushandisa kwenguva refu. Nylon upholstery kana ichibviswa, inobvumira mushandisi kuti abvise izvo zvinhu uye azvigeze zvakanyanya kudikanwa.
Zvisingaremi Hwemhando Wiricheya
Lightweight mavhiripu zvave kuita zvakajairika munyika yanhasi, zvakakosha kuve nemhando yakareruka furemu.
Yekutakura Hunhu Wiricheya
Zvekufambisa zvemhando yepamusoro mavhiripu anowanzo kugadzirwa nealuminium, uye anogadzirwa kuve anogara kwenguva refu mhinduro yekufamba.
Nderupi Rudzi rwe Huru Wiricheya Ndinoda here?
Zvichienderana nerudzi rwako rwe wiricheya, Tinogona kukubatsira iwe kuwana mavhiri akakodzera echigaro chako.
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve edu emhando zvigaro.
Wiricheya Mavhiri - Ebay.com Wiricheya Wiricheya - 1-800 Wiricheya.com Wiricheya Mawiriche - Spinlife.com